VALY FATY : Nolanian’ny malaso tamin’ny lehiben’ny andrimasom-pokonolona ny bala
Niverina indray ny asan-dahalo ao amin’ny Distrikan’Ambohimasoa tato ho ato. 13 mars 2018
Resaka valy faty no manjaka any an-toerana ankehitriny satria efa tapitra lany nangalarin’ny dahalo ny omby dia izay olom-panjakana na olona miseho mananatra ireo malaso no lasibatr’izy ireo indray. Araka ny vaovao azo, ny herinandro lasa teo dia inefatra notafihin’ny dahalo tao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Tsarafidy, distrikan’Ambohimahasoa.
Nidiran’ny andian-dahalo an-keriny ny tranon’ny lehiben’ny andrimasom-pokonolona ao Ankafina, kaominina ambanivohitr’i Tsarafidy, afak’omaly alina ka ny hamono io lehilahy io no anton-dian’ireo olon-dratsy tao an-toerana. Vao nandre poa-basy ilay filohan’ny andrimasom-pokonolona dia nanamafy ny hidin- tranony, kinanjo niakatra avy any ambony tafon-trano ireo malaso no niditra. Voalaza fa tanimanga ny tafo ka mora tamin’izy ireo ny nanala izany. Raha vao tafiditra tao an-trano ireo olon-dratsy avy hatrany dia norarafan’izy ireo tifitra teo amin’ny lohany sy kibony ity raim-pianakaviana ity ka tsy tana ny ainy, araka ny vaovao azo ihany.
Tsy nokitihana kosa ny vady aman-janany fa ny akoho amam- borona sy ny vary tamin’ny gony no nentin’izy ireo. Voalaza fa somary mitokana ny toerana misy ity trano voatafika ity ka efa tafaporitsaka ireo malaso vao tonga namonjy ny fokonolona. Araka ny fampitam-baovao dia valy faty no nahazo io raim-pianakaviana io satria miady amin’ny asan-dahalo ny asan’ny lehilahy. Tsara ny manamarika fa ny voalohan’ny herinandro lasa iny dia maty novonoin’ny dahalo ihany koa ny rahalahin’ity lehiben’ny andrimasom-pokonolona namoy ny ainy ity.
Lasibatra ny Ben’ny tanàna lefitra ao Sahave
Mbola manaraka fitsaboana ao Fianarantsoa ny lefitry ny Ben’ny tanàna, kaominina Sahave, distrikan’Ambohimasoa ankehitriny noho ny tifitra nataon’ny dahalo azy ny alarobia tolak’andro lasa teo. Raha ny fitantaran’io niharam-boina io nandritra ny fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana azy dia i Pisolahy no nitifitra azy ary lehiben’ ny dahalo mpanao fanafihana sy fanakanan-dalana amin’ny lalam-pirenena fahafito iny no nahavanon-doza. Tamin’ny lalana nody avy niasa ny lehilahy no nandrasan’ny Pisolahy. Tsy nisy resaka fa norarafany ny tifitra teo amin’ny tarehiny ny lefitry ny Ben’ny tanàna ka potika tanteraka ary bala efatra no nahazo azy. Torana tsy nahatsiaro tena ity farany tamin’ny fotoana nahitan’ny olona sendra nandalo azy ka noentina namonjy hopitaly tao Ambohimasoa avy hatrany. Tsy misy atahorana ny fahasalamany amin’izao fotoana, araka ny vaovao voaray farany.
Tsy naiditra am-ponja i Pisolahy
Teny am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ihany dia efa navotsotra i Pisolahy ka mahagaga ny mponina ao an-toerana ny zava-misy eo anivon’ny mpitandro filaminana sy ny Fitsarana ao Ambohimasoa. Noho ny tahotra ny mety hisian’ny valy faty ihany koa ve sa inona marina ? Tsy nandalo tribonaly akory ny nahavanon-doza dia efa votsotra ary mety mbola hanohy ny asa ratsiny ihany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra hentitra manoloana ity jiolahy raindahiny amin’ny asan-dahalo. Mihorohoro amin’io lehilahy io avokoa ny mponina ao amin’ny Distrikan’Ambohimasoa. Manahy mafy amin’ny ain’izy ireo, amin’izao fotoana ny fianakavian’ny niharan-doza noho ny tsy nampidirana am-ponja an’i Pisolahy.
Valy faty ihany koa no nahazo ity Ben’ny tanàna lefitra ity satria nisy fotoana izy io nananatra ireo dahalo. Voalaza fa mpivarotra bala ary efa tambajotran- dahalo efa ela be no misy an’i Pisolahy. Manoloana ny zava-misy ao amin’ny distrikan’Ambohimasoa izany dia manao antso avo amin’ny fanjakana ny vahoaka satria miaina ao anatin’ny tebiteby tanteraka izy ireo ankehitriny.